Ny antony mahatonga ny alopecia potika | Noti saka
Ny antony mahatonga ny alopecia licine
Maria Jose Roldan | | aretina
Tianay be ny saka anay ary tianay ho salama foana izy, saingy indraindray ny olana dia saika tsy tsapantsika akory, ary rehefa tena miahy ny fahasalamany izahay. Iray amin'ireo tsy ampoizina tsy ampoizina dia ny alopecia feline, izany hoe ny fihenan'ny volo be loatra izay mety hiteraka sola amin'ny faritra sasany amin'ny vatanao.
Ny fahaverezan'ny volo amin'ny zana-kazo dia mety miteraka antony maro samihafa toy ny aretin-koditra (ratra, parasy) na antony hafa. Matetika ny saka indraindray no mahatonga io fihenan'ny volo io amin'ny fanadiovana be loatra ny tenany satria mahatsiaro mangidihidy izy noho ny tsy fahazakana na misy katsentsitra ao anaty palitaony.
1 Inona no antony?
1.2 allergie na tsy fahazakana
1.3 Aretin'i Cushing
1.5 Manaikitra ny felana
1.6 Olana tiroida
Inona no antony?
Misy fotoana izay ny saka izay misy fanaintainana eo amin'ny vitrana dia mety manana faritra tsy misy volo amin'ny vatany koa amin'ny nandrovitra azy teo am-piezahana nampitony ny aretiny. Ny saka adin-tsaina koa dia afaka mahazo alopecia satria miahy be loatra ny tenany ary imbetsaka. Izany dia mariky ny fihenjanana ary raha heverinao fa manana azy ny saka dia tokony hikatsaka fitoniana indray ao an-tranonao ianao.
Etsy an-danin'izany, rehefa misakafo be loatra ny saka dia mety hiteraka mandoa volom-bolo betsaka noho ny tokony ho izy io, ary manana fandevonan-kanina mavesatra loatra koa amin'ny fitelemana volo be loatra amin'ny fikolokoloana be loatra.
Ankoatra izany, misy koa ny olana eo amin'ny hormoninaNa dia tsy fahita firy aza izy ireo, dia mety hiteraka volo amin'ny saka, na dia tsy mangidihidy aza izy ireo ary tsy manintona izany volo izany.
Ilaina ny mailo fa misy ny antony mahatonga ny alopecia feline, toy ny ringworm, izay azo ampitaina amin'ny olombelona ary noho izany dia ilaina ny fitsaboana azy io haingana araka izay tratra.
Araka ny hitanao dia misy antony maromaro mahatonga azy io, noho izany dia ho hitantsika tsirairay izy ireo hahafantatra ny fomba fihetsika. Amin'ity fomba ity ihany, dia afaka mihetsika haingana ianao raha mieritreritra fa ny alika dia mety hanana alopecia amin'ny antony rehetra ilana fanampiana ara-pitsaboana haingana araka izay tratra.
Aza adino inona no antony mahazatra indrindra ary ho fantatrao ny fomba fihetsika raha sanatria ka misy zavatra voalaza etsy ambony hitranga amin'ny sakao.
Manaikitra ny saka ireto zavamiaina bitika ireto miteraka mangidihidy be. Amin'ny fikororohana be dia be dia afaka hiafara amin'ny faritra tsy misy volo ianao. Tsy maintsy ataonao voafehy tsara ilay biby, satria ny kongana dia mety miteraka lagalyAry misy karazany iray, ny mange sofina, izay mifindra tokoa na amin'ny saka na amin'ny saka na amin'ny saka ka hatramin'ny olombelona.
Ny fitsaboana dia misy asio antiparasitika manala ny bibikely, ary raha sanatria manana aretin-koditra ianao, omeo intravenna ny fanafody biby hahafahanao mamafa azy ireo.
allergie na tsy fahazakana
Mampalahelo fa mety manana karazana allergy ihany koa ny saka, satria ireo no mahatonga ny alopecia the sakafo ary ny TONTOLO IAINANA. Ny teo aloha dia vokatry ny fihinanana sakafo sasany izay tsy zakan'izy ireo tsara, toy ny serealy izay matetika misy sakafo betsaka, ary izay miteraka mena ny hoditra amin'ny faritra kely iray, fa mety hiparitaka amin'ny faritra sisa amin'ny vatana.
Ny fampidirana alergia amin'ny tontolo iainana, toy ny vovobony na ny vovoka dia mety hiteraka alopecia ihany koa.
Ny fitsaboana dia hisy tazomy ny saka tsy hiala amin'io gergie io izay miteraka mangidihidy sy tsy mahazo aina.
Izy io dia aretina mikraoba izay miavaka amin'ny famokarana hormonina steroid amin'ny fihary adrenal. Iray amin'ireo soritr'aretina mahazatra indrindra ny ny fihenan'ny volo amin'ny endrika simetrika.
Mampalahelo fa mbola tsy misy fitsaboana manokana momba an'io aretina io. Ny fanafody dia matetika ampiarahana amin'ny fiovan'ny sakafo.
Biby ny saka tena mitombina, hatrany amin'ilay hoe stress, fahasosorana na fanovana mitranga ao an-trano dia mety hiteraka volo. Mba hisorohana an'io dia tsy maintsy milamina ny biby, maniry izany araka ny sahaza azy ary mampiasa vokatra toy ny feliway raha handia toe-javatra mampiady saina ianao (toy ny mandeha any amin'ny veterinera ohatra).
Manaikitra ny felana
Io no mahazatra indrindra. Parasy manaikitra ny saka, ary vaky ny tenany noho ny mangidihidy aterak'izany. Matetika io dia tsy olana goavana, fa raha maro ny biby, afaka miafara amin'ny kirany sy kirany amin'ny hoditrao ianao.
Tsotra ny fitsaboana azy. Misy ao asio antiparasite -toy ny pipette, collar, spray- na omeo pilina atolotry ny mpitsabo biby izy ho anao hamafa azy ireo. Amin'ny tranga henjana dia mety ilaina ny manasa ny saka amin'ny shampoo manokana, izay atolotry ny matihanina ihany koa.
Ny fihenan'ny volo amin'ny saka dia mety ho famantarana fa tsy mandeha tsara ny fihary tiroida. Ny totohondry dia mety manana hyperthyroidism na hypothyroidism, izay aretina mety hiteraka flaking sy alopecia.
Ny fitsaboana dia hisy manome anao hormonina ka miverina manatanteraka ny asany ny fihary fihary.
Voalohany indrindra ny mpitsabo dia tokony hanadihady ny antony mahatonga ny alopecia amin'ny saka. Miankina amin'ny antony, tsy hitovizany ny fitsaboana, satria ny fitsaboana parasy dia tsy mitovy amin'ny fitsaboana ringworm, ohatra.
Raha miahiahy, ohatra, ny mpitsabo biby fa voan'ny alopecia ny saka satria izy no mahatonga azy noho ny olana ara-pitondra-tena, tokony hisaintsaina an'izany ianao izay mety mijaly sy mitady vahaolana haingana. Andramo fa afaka mahita fihavanana aminao ao anaty trano ny saka anao.
Raha aorian'ny fisaintsainana dia mbola tsy fantatrao ny antony mahatonga ny saka tsy hihena volo, dia tena zava-dehibe ny manatona mpitsabo biby manana fahaizana manokana momba ny dermatolojia.
Matetika, ny hafahafa alopecia dia miankina amin'ny antony mahatezitra azy foana. Miankina amin'ny avy amin'ny parasy, parasy, adin-tsaina ... na olana hafa. Ny fanarenana izay mahatonga azy io faran'izay haingana dia tena ilaina.
Saingy tadidio fa ny manatona mpitsabo biby manam-pahaizana manokana momba ny dermatolojika dia tena zava-dehibe satria izy no hanampy anao indrindra hamantatra ny antony mahatonga ny feline anao. Raha sendra adin-tsaina na olana ara-pihetseham-po koa izany hevitra tsara ny mankanesana any amin'ny manam-pahaizana momba ny fitondran-tena ny biby mba hahafantarana ny zava-mitranga ary manomboka amin'ny fomba fanarenana haingana araka izay tratra.
Araka ny efa hitantsika, ny alopecia volo dia mety ho famantarana fa tsy salama ny saka. Raha miahiahy ianao fa misy zavatra tsy mety amin'ny namanao dia aza misalasala mitondra azy any amin'ny mpitsabo biby.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » aretina » Ny antony mahatonga ny alopecia licine
Karina dia hoy izy:
Salama, ny aloko dia manana alopecia saingy tsy azoko antoka hoe iza no tena pathology, ka afaka namaky azy io aho noho ny kongana na ny tsy mahazaka alika raha afaka manampy ahy izy ireo:
Misy amin'ny rantsam-panahiny ny hodiny mena ary mivonto be nefa manintona ny volony izy ary mandalo azy milelaka sy milelaka ary indraindray hitako mandry mandry izy ary tampoka dia mitsambikina izy, mihazakazaka, mihodina ary mihifikifi-tongotra, ary miparitaka manerana ny faritra. amin'ny tongotra, raha lazaina, nandositra aho ary mahasosotra ny mahita azy toy izao
Mamaly an'i karina
Manoro hevitra anao aho mba hitondra azy any amin'ny mpitsabo biby. Miharihary fa tena manana fotoan-tsarotra izy.
Ny mpitsabo biby ihany no ho afaka hilaza aminao izay ananany sy ny fomba hitsaboana azy.
Lucian dia hoy izy:
Tena tsy feno ny lahatsoratrao ary misy lesoka lehibe ihany. Tsy misy ny hypothyroidism Feline ary amin'ny lafiny iray hafa, raha biby hyperthyroid dia tsy ampiarahina amin'ny hormonina mba hiasa indray ny fihary ao, satria ny olana dia miasa loatra io. Makà torohevitra amin'ny manam-pahaizana manokana.
Valiny tamin'i Luciano
Fa maninona ny saka no misakafo fatratra?
Ahoana no hamerenana ny fahatokisan'ny saka?